दक्षिण कोरियाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ अमेरिका जाने
सोल । दक्षिण कोरियाका एकजना वरिष्ठ कूटनीतिक अमेरिकाको भ्रमणमा जान लाग्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री लिम सोङ नाम यही मङ्गलबार अमेरिका जान लाग्नुभएको छ । उहाँले आगामी शनिबारसम्म न...
पेरुमा शक्तिशाली भूकम्प, कयौं भवन ध्वस्त, राजमार्ग भत्केकाले उद्धारमा कठिनाई
पेरु। दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुको दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा ७.१ म्याग्नेच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६५ जना घाईते भएका छन् । धेरै भवनहरु ध्वस्त भएका ...
महिनावारी भएकालाई नदी पार गर्न प्रतिबन्ध
अफ्रिकी मुलुक घानामा महिनावारी भएकालाई नदी पार गर्न प्रतिबन्ध लगाएसँगै बालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको भन्दै अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । घानाको आफिन नदीमा बनेको पुलबाट महिनावारी भएको बेलामा...
फेसबुकमा हुन्दैछ यस्ता परिवर्तन
फेसबुकले समाचार, बिजनेस, ब्रान्ड र मीडिया सम्बन्धी फीडको सम्वन्धमा केहि ठुलै परिवर्तन गर्न लागेको छ । फेसबुकका मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्गले आफ्नो फेसबुक पेजमा यसको जानकारी दिएका छन्। उनले...
आप्रवासीबारे ट्रम्पद्वारा अशिष्ट भाषा प्रयोग
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दुईदलीय सहमतिका आधारमा ल्याइएको आप्रवासन सम्बन्धी एउटा सम्झौताको प्रस्ताव खारेज गर्ने क्रममा हेइटी र अफ्रिकी देशहरूबारे अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका छन्। ह्वाइट हाउसम...
अष्ट्रेलियन बैज्ञानिकहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने
क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाली बैज्ञानिकहरुले हालैका दिनमा यहाँ देखा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा गहन अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा वातावरणीय असन्तुलन देखिएको छ । जसका ...
लन्डनमा भएको भारतीयको हत्यामा संलग्नको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक
लन्डन । भारतीय मूलका एक व्यक्ति को हत्यामा संलग्न दुई युवकको लन्डन पुलिसले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरेको छ। मिल हिल क्षेत्रमा एक पसल बाहिर भएको आक्रमणमा ४९ बर्षीय विजय पटेल घाइते भएका थिए। उनको सोमबा...
समलिंगी विवाहको भिडियोमा देखिएकाहरुलाई पक्रदै प्रहरी
साउदी अरबमा गत हप्ता भएको समलिंगी विवाहको भिडियोमा देखिएका धेरै युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दुई पुरुष एकअर्कासँग जोडिएर हिंडिरहेका थिए । एकले दुलहीको लुगा लगाएका थिए । उनीहरुमाथि फूल बर्साइएको...
होन्डुरसमा ७.६ रेक्टरको भूकम्प
होन्डुरस । मध्य अमेरिकाको होन्डुरसको उत्तरमास्थित क्यारिबियन समुद्रमा केहीसमय अघि ७‍.६म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ अध्ययन संस्था (यूएसजीएस)ले जनाएको छ । भूकम्प गएसँगै त्यहाँ 'प्यासिफिक स...
३ खर्ब डलरको बिजुलीको बिल आएपछि झण्डै बेहोस् !
तपाइँको घरमा बिजुलीको बिल कति उठ्छ ? हरेक महिना बिजुलीको बिल आउँदा तर्सिनु त परेको छैन नि ? एकजना अमेरिकी महिला चाहीँ बिजुलीको बिलका कारण झण्डै मुर्छा परिनन् । अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियास्थित इरीकी बास...
उत्तर कोरियाप्रति लचक बन्दै ट्रम्प
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाप्रति केही लचक बन्दै गएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनसँग वार्ता गर्न चाहेको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । ...
दक्षिण कोरियामा हुने ओलम्पिकमा भाग लिने उत्तरको निर्णय
काठमाडौं । आउँदो फेब्रुअरीमा दक्षिण कोरियाको सिओलमा हुने विन्टर ओलम्पिकमा आफ्ना खेलाडी तथा समर्थक पठाउन उत्तर कोरिया सहमत भएको छ । दुई कोरियाका उच्च अधिकारीबीच मंगलबार बिहान भएको उच्चस्तरीय वार्तामा उ...
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच उच्चस्तरीय वार्ता सुरु
काठमाडौं । उत्तर र दक्षिण कोरियााबीच उच्चस्तरीय वार्ता शुरु भएको छ । पान्मुन्जोम गाउँस्थित पिस हाउसमा वार्ता भइरहेको बताइएको छ । दुई बर्षयता पहिलोपटक यी दुई देशबीच मंगलबार उच्चस्तरीय वार्ता सुरु भएको ...
तलवमा लैगिंक विभेदपछि बीबीसीकी सम्पादक ग्रेसीको राजीनामा
बीबीसी चिनियाँ सेवाकी सम्पादक क्यारी ग्रेसीले असमान तलबका कारण आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनका अनुसार, बीबीसीमा पुरुष कर्मचारीको तुलनामा महिला सहकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म तलवमा विभेद गरिएको छ । त...
उत्तर कोरियाली शासक किमका लागि स्कुलबाटै उठाइन्थ्यो केटीहरु
उत्तर कोरियाली शासक किम जोन उन आज आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै छन्। किम यती विवादीत छन् कि उनको जन्मदिन को बारे मा धेरै जानकारी छ। उत्तर कोरियालीा अधिकारका अनुसार, उनी ८ जनवरी १९८२ मा जन्मेका थिए, जबकि दक्षि...
भारतको एउटा बारमा आगलागी, पाँचको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । दक्षिण भारतीय राज्य बङ्लुरुमा रहेको एक रेष्टुरेन्टको बारमा सोमबार भएको आगलागीमा परी त्यहाँ कार्यरत पाँच व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार छ । अधिकारीहरुका अनुसार सो घटनामा मारिएका व्यक्तिहरु...
उत्तर कोरियाले पठायो वार्ता टोलीका सदस्यको नाम
सोल । दक्षिण कोरियासँग गर्ने तय भएको उच्चस्तरीय वार्ताका लागि उत्तर कोरियाले पनि आफ्नातर्फका वार्ता टोलीका सदस्यको नाम दक्षिण कोरियालाई पठाएको आइतबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । दक्षिण कोरियाको राष्...
अफगानिस्तानको फराह प्रान्तमा तीन कमाण्डर सहित आइएसका २० लडाकू मारिए
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको पश्चिमी फराह प्रान्तमा अफगान सेनाको नेतृत्वमा रहेको यहाँको संयुक्त सुरक्षा फौजले गरेको हवाई कारबाहीमा परी यहाँका स्थानीय कमाण्डरसहित २० जनाको ज्यान गएको छ । प्राप्त समाचार...
आफ्नो मानसिक स्थितीका बारेमा बेल्दै ट्रम्पले भने, ‘म ‘बौद्धिक र क्षमतावान’व्यक्ति हुँ’
अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार बिहानै ट्वीटर सन्देशमा आफू ‘एकदम स्थिर क्षमतावान् स्वभाव’को मानिस भएको बताएका छन् । एउटा विवादास्पद पुस्तकका लेखक ह्वाइट हाउसका कर्मचारीले ट्रम्पल...
डेङ्गुको खोपबाट १४ बच्चाको मृत्यु भएको आशंका
मनिला, फिलिपिन्स । फिलिपिन्समा डेङ्गुको खोपका कारण १४ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको आशंका सहित अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्यमा सतर्कता अपनाउदै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको खोप नै उनीहरुको मृत्युको का...